ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်မှာ ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ No.7ဂျာစီကို ဝတ်ဆင်မယ့် ဟာဇက် | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်မှာ ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ No.7ဂျာစီကို ဝတ်ဆင်မယ့် ဟာဇက်
အီဒင်ဟာဇက်ဟာ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်မှာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးရာသီမှာ ဂန္တဝင်ကျောနံပါတ် (၇) ဂျာစီကို ဝတ်ဆင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ကလပ်အသင်းက သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါကျောနံပါတ် (၇) ကို စန်တီယာဂို ဘာနေဗျူးမှ နာမည်ကြီးကစားသမား နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ရာအူးလ်တို့ ဝတ်ဆင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာသီကြိုပွဲစဉ်တွေမှာ နံပါတ် (၅၀) ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဟာဇက်က အခုချိန်မှာ ကျောနံပါတ် (၇)ကို ရယူသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဆီ ရော်နယ်လ်ဒို ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးနောက် မာရီယာနိုက ကျောနံပါတ် (၇) ကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုက်စစ်မှူး မာရီယာနိုဟာ နာမည်ကြီး နံပါတ် (၇) ဂျာစီကို ဟာဇက်ဆီ လွဲပြောင်းပေးပြီးနောက် ကျောနံပါတ် (၂၄)ကို ပြောင်းလဲ ဝတ်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသက် (၂၈)နှစ်အရွယ် ဟာဇက်ဟာ ယခုနွေရာသီမှာ ချယ်လ်ဆီးကနေ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်ဆီ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရိုသန်း (၁၀၀) နဲ့ အပြီးသတ် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ အသင်းကို ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ ကစားသမားတွေရဲ့ ကျောနံပါတ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ မီလီတာအိုက (ကျောနံပါတ် ၃)၊ မန်ဒီ (ကျော်နံပါတ် ၂၃)၊ လူကာဂျိုဗစ် (ကျောနံပါတ် ၁၈) နဲ့ ရိုဒီရီဂို (ကျောနံပါတ် ၂၇) အသီးသီး ဝတ်ဆင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပြောင်းအရွှေ့စျေးကွက်မှာ အသင်းပြောင်းမယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွက်ဇ်မှာ ကျောနံပါတ် (၁၆) ကို ဝတ်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဇီဒန်းက အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ လိုလားနေတဲ့ ဘေးလ်ရဲ့ ကျောနံပါတ်ကတော့ အပြောင်းအလဲ မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဂိုးသမား ကော်တိုရစ်က အသင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ ပထမရာသီမှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ နံပါတ် (၂၅) အစား ချယ်လ်ဆီးနဲ့ အက်သလက်တီကိုအသင်းတို့မှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့ဖူးတဲ့ နံပါတ် (၁၃) ကို ပြောင်းလဲ ဝင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရီးယဲလ်အသင်းနည်းပြ ဇီဒန်းဟာ ဆယ်လ်တာဗီဂိုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့် သြဂုတ် ၁၇ ရက် လာလီဂါပြိုင်ပွဲရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ အတောင့်တင်းဆုံးလူစာရင်းကို ပွဲထုတ်သွားဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
Eden HazardHazardReal Madrid